UK Councillor Abdifatah oo loo magacaabayo Gudoomiya sare ee doorashooyinka muraqibiinta Somaliland
Sunday October 08, 2017 - 08:41:54 in Maqaallo by Wariye Tiriko
MagacibistaGudoomiyaha Sare ee Doorashooyinka maamulka muraqibiinta oo Somaliland oo ku siijeeda wadanki.
Councillor Abdifatah Nur Adan (Nur Bitig) oo ah Xildhibaan ruug cadayaaka soo Jeeda cariga Ingriiska siiba Magalada London, Ayaa dowlada Ingriiska, Commissionak iyo Somaliland Ku wadaan inay u magacaabi doonanaGudoomiyaha sare ee doorashooyinka iyo maamulka muraqibitiin(observorska).
Xildhibaanka oo casho aad u sareysa loogu qabtey magalada London ayaa hada ku siwajahan inuu ka dego madaarka Cigaal international maalinta Axada subaxiee beri inaga Xigto. Xildhibaanka oo in badan ka war wareegayay in xil loo dhiibo hadaba waxa aanu weli gosan inu xilkan aqbali doono isaga oo raba inu la kulmo madax weynaha iyo gudoomiyasha xisbiyada.
Wadanka Somaliland oo la filaayo ilaa 2000 oo muraaqib aha (observors) inay ka qaybtaan doorashooyinka kuwaas oo ka kala socda wadamo kala duwant, Waxa la filaya in uu shirar kala duwan la yeelan doono Muraqibtiinta, commissionka, dowlada, xisbiyada iyo ururo kale oo badan.
Waxa subaxa ahada uu shir jar i ku qaban doona madarka cigaal international airport halkaas oo la filaayo inu u warami doono saxafada.